के महिलामा पनि चाँडै स्खलन हुने समस्या हुन्छ ? स्खलन पछि के हुन्छ ? - Purbeli News
के महिलामा पनि चाँडै स्खलन हुने समस्या हुन्छ ? स्खलन पछि के हुन्छ ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ ०९, २०७६ समय: १६:५९:३१
काठमाडौँ / तुलनात्मक रूपमा पुरुषमा शीघ्र स्खलनको समस्या देखिन्छ। तर, कतिपय महिला पनि पुरुष लिंग छिराउनासाथ स्खलन हुने समस्याबाट पीडित छन्। महिलामा हुने यस्तो खाले शीघ्र स्खलनले पुरुष यौन साथीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसो त स्खलित हुनु र चरम सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु फरक कुरा हो। कतिपय अवस्थामा (विशेषतः पुरुष पार्टनरमा) वीर्य स्खलनसँगै चरम सन्तुष्टि प्राप्त हुने र लगत्तै यौनांग शिथिल हुने भएकाले पनि यो भ्रम सिर्जित भएको हो।